Mpanamboatra PET - Orinasa mpamatsy PET China
Capsule tavoahangy PET fotsy
Capsule tavoahangy HDPE CFB-25
Capsule tavoahangy mena mena
Capsule tavoahangy PET Green
Capsule tavoahangy PET Brown
• Manome serivisy presales amin'ny endrika isan-karazany izahay, ohatra, ny famolavolana ny famolavolana sy ny bobongolo misokatra amin'ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, manome ny Pirinty Logo ho fitakian'ny mpanjifa, sns.
• Alefaso amin'ny mpanjifa ireo santionany ho referansa
• Tetibola fampiasam-bola: Manome tolotra fandinihana tombom-barotra izahay, tolo-kevitra momba ny vokatra ary teti-bola mifanaraka amin'izany.
Fitsipika kalitaon'ny tavoahangy plastika. Manaova fanadihadiana momba ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny fenitry ny kalitaon'ny vokatra ataon'ny mpanamboatra hamaritana raha ilaina izany. Ny orinasan-tavoahangy plastika ara-panafody dia tokony hamolavola ny fenitry ny orinasa avo kokoa noho ny fenitra nasionaly, ary ny fenitry ny indostria dia tokony ho hentitra kokoa;
Amin'izao fotoana izao dia olona maro no hisaina ny fotsy voalohany rehefa misafidy ny lokon'ny tavoahangy plastika. White dia tena marobe ary azo ampifanarahana amin'ny loko hafa. Na izany aza, maro ny olona manantena fa ny lokon'ny fonosana vokatra dia ho mavitrika sy manankarena kokoa. Green koa dia loko iraisana ary mahazo aina kokoa. Olona maro no mitovy amin'ny fofona maintso sy voajanahary amin'ny maitso, saingy sarotra ny mahazo ny collocation loko afa-tsy ny maitso amin'ny tavoahangy plastika.
Ny tavoahangy plastika PET dia mitana toerana lehibe eo amin'ny tsena amin'ny ankamaroan'ny tsenan'ny fitoeran-javatra. Izy io dia tsy azo sarahina amin'ny tombony azo amin'ny tavoahangy plastika PET. Voalohany indrindra, ny fahamarinan-toerana momba ny tavoahangy plastika dia tsara, fanoherana ny hafanana, amin'ny mari-pana iray mba hitazonana ny fitoniana ara-materialy, indrindra indrindra ho an'ny fonosana sakafo. Faharoa, ny tavoahangy plastika biby dia mangarahara ary mitovy endrika amin'ny tavoahangy fitaratra, saingy maivana sy marefo izy ireo.
Capsule PET Blue
Fonosana mitoka-monina avo. Ny fonosana mitokana avo lenta dia ny fampiharana akora mitokana mitokana mba hifehezana ny entona sy ny etona rano. Mamofona, maivana sns ... ao anaty fonosana hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fanafody. Fonosana mitokana be dia be no nampiasaina tany Eropa sy Japon. Na izany aza, nampiditra PVDC sy fonosana fitokana-monina avo hafa i Sina nanomboka ny taona 1980, saingy miadana ny fitomboany. Noho izany, ny fitomboan'ny fonosana fitaovana mitokana avo lenta dia fironana lehibe amin'ny fonosana fanafody malefaka any Shina;
Capsule tavoahangy PET mainty
Ny kalitaon'ny bika plastika fitsaboana: fotsy amin'ny ankapobeny ny tavoahangy fitsaboana mafy. Amin'ny ankapobeny volontsôkôlà na mangarahara ny tavoahangin-tsiranoka am-bava, ary ny vokatra loko hafa dia azo hamokarana arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa. Ny loko dia tokony hitovy, tsy misy fahasamihafana mazava loko. Ny faritra dia tokony ho malama sy malama, tsy misy fanovana sy gorodona miharihary, lavaka fasika, tasy menaka ary miboiboika. Ny vavan'ny tavoahangy dia tokony ho malama sy malama.
Capsule tavoahangy PET mavo
Raha ny marina, ny fiarovana ny tavoahangy PET dia tsy azo sarahina amin'ny tombony azo amin'ny tavoahangy plastika PET. Ny voalohany dia ny tavoahangy plastika PET fa mavesatra ny lanjany ary mateza amin'ny fitaovana. Ny faharoa dia ny tavoahangy plastika PET fa mora vidy. Raha ampitahaina amin'ny fonosana vera sy seramika dia ambany kokoa ny vidin'ny tavoahangy plastika PET. Fahatelo, ny tavoahangy PET dia manana tahan'ny fanodinana avo, izay avo lavitra noho ny tavoahangy plastika hafa, izay mahatonga ny fiarovana ny tontolo iainana.
Capsule tavoahangy PET mangarahara
Ny votoatin'ny hamandoan'ny fitaovana dia tsy maintsy ho maina alohan'ny famokarana. Amin'ny ankapobeny, ny maripana fanamainana dia 160 ℃ ho an'ireo fitaovana maina. Raha mitahiry lava be eny amin'ny rivotra izy, dia tsy handray ny hamandoana. Noho izany, raha vao maina ny akora dia tsy maintsy ampiasaina eo no ho eo na mivantana amin'ny fanamainana maharitra izy ireo, raha tsy izany dia tsy maintsy tazonina ao anaty incubator amin'ny 90 ~ 100 ℃ ho an'ny standby, mba hisorohana ny fidiran'ny hamandoana aorian'ny fanamainana.
Wuxi qianduo fonosana teknolojia Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana dia mirotsaka amin'ny famolavolana sy fanamboarana karazan-tavoahangy rehetra, toy ny tavoahangy fanosotra, tavoahangy fanafody.